November 8, 2019 - ThutaSone
သူများဝေတဲ့ အမျှကိုလဲ ရမ်းမယူနဲ့ ဆိုတဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
November 8, 2019 ThutaSone 0
အမျှကိုလဲ ရမ်းမယူနဲ့ သူက (၁၀၀၀၀၀)ဖိုး လှူလိုက်တယ် အမျှပေးတယ်ခင်ဗျားတို့က (၅၀၀၀၀)ဖိုးတော့ရပါတယ်သူက နွားသတ် ဝက်သတ် ကြက်သတ်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါတယ် အမျှလဲဝေလိုက်ပါတယ် ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့က လိုချင်သေးလား သာဓုခေါ်ရင်တော့ တစ်ဝက်ရတော့မှာသစ္စာမသိပဲ ရမ်းလှူတဲ့ အလှူဆိုတော့ အဖြူကံနဲ့ အမည်းကံ ရောနေတယ် အဖြူတစ်ဝက် အမည်းတစ်ဝက် အကျိူးပေးရမယ်။ ကျေးဇူးတော်ရှင် […]
၁။ အရပ်လေးမျက်နှာမှ လေးကောင်သော နွားလားဥသဘတို့သည် လာလတ်၍ မင်းရင်ပြင်၌ ဝှေ့မည်ဟု တွန်မြည် ကြုံးဝါးလျက် မဝှေ့ပဲသာလျှင် ဖဲလေကုန်သည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။ နောင်အခါ အရပ်လေးမျက်နှာမှ မိုးတို့သည် ရွာအံသကဲ့သို့ ထစ်ကြိုးလျက် မရွာပဲသာလျှင် ပျောက်ပျက် ကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ ကောက်ပဲသီးနှံတို့ ပျက်စီး၍ လူတို့၌ အစာရေစာ […]
လာဘ်လာဘ ပိတ်နေသူများအတွက် … လက်တွေ့ချမ်းသာ ရှင်သီဝလိ ဂါထာ !
ကျွန်ုပ် နှင့် ဆရာတော် အရှင်စန္ဒာသူရိယတို့လက်တွေ့အသုံးပြုထားသော ရှင်သီဝလိ ကိုယ်တော်ကြီးအား ပူဇော်ကန်တော့၍ လာဘ်လာဘ ရရှိရန် ဆုတောင်းသော လာဘ်ဖွင့် အစီအရင် တစ်ခုပါ။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ဖယောင်းတိုင် တစ်တိူုင်ကို သနချေ သိဒ္ဓိတင် ဂုဏ်တော် ရွတ်ဖတ်ပြီးပါက ရှင်သီဝလိ ဂါထာကို ဖယောင်းတိူင်မှာ ဖယောင်းတိုင် အခြေကနေ စရေးပါ။ထို့နောက် […]
စိတ်မကောင်းစရာလူ ၁၃ ဦး သေတဲ့ ကထိန်ကားမှောက်မှု ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်လွင်လွင်မြင့်ရဲ့ နောက်ဆုံးပုံရိပ်များ
နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က ကထိန်ခင်းဖို့ သွားတဲ့ ကား သပိတ်ကျင်းနားမှာ ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၁၃ ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်…. ဒီကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်စဉ်လေးဟာ အင်တာနက်ပေါ်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးနောက် ဖတ်ရှုရသူအားလုံးက ကရုဏာသက်ဝမ်းနည်းခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ကားမှောက်လို့ သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာ ဆရာတော် ၂ ပါးလည်း ပါဝင်ပြီးအမျိုးသမီး ၁၀ […]
အရမ်းအားကျမိတဲ့အသက် (၂၈) နှစ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ သူ
ကျွန်တော် အရမ်းအားကျမိတဲ့ မဝေသစ်လွင်မဝေသစ်လွင်အကြောင်း ရေးဖို့တွေးနေတာ တော်တော်ကြာပါပြီ ခုတော့ အကယ်ဒမီပေးပွဲရဲ့ ပုံရိပ်တွေကြောင့် ပိုလူသိများလာလို့ ရေးဖို့ သတိရသွားတာပါ။ သူ့ကို အရမ်းအားကျမိတယ်ဆို လွန်တယ် မထင်ပါနဲ့။ သူဟာ အသက်၂၈နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အသက်သိပ်မကွာတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းစီးပွားရေး ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်နေတာ ကျွန်တော်အရမ်း လေးစားမိတယ်။ […]
မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် မိုးသက်လေပြင်း ကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် (၅၅)မိုင်မှ မိုင်(၆၀)အထိ တိုက်ခတ်နိုင်
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် အားအလွန်ကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသတင်းအမှတ်စဉ်(၁၈/၂၀၁၉) (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်) (မြန်မာစံတော်ချိန်(၁၆:၀၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်) (က) အားအလွန်ကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအခြေအနေ (၁) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၅:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော […]
ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ရရှိထားသူကတော့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးပါ။ သူတို့မိသားစုလေးကို ကြည့်ပြီး ပရိသတ်တွေကအားကျနေရတာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးဟာ သားလေးနဲ့တွေ့ရန် မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတာပါ။ လီလီလုံးလေးဟာ ဖေဖေနဲ့မေမေကို လေဆိပ်ထိ သွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့တာပါ။ လီလီလုံးလေးဟာ ဖေဖေနဲ့မေမေကို အချိန်ကြာကြီးခွဲနေရတဲ့အတွက် အလွမ်းသည်နေတာပါ။ ဒီကနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ (၈) […]
ကောင်မလေးက တောင်ကြီး မီးပုံးပွဲ ကို ခေါ်လို့ သွားခဲ့ပေမယ့် ရှောင်နေခဲ့လို့ သေတမ်းစာရေးပြီး သေပွဲဝင်ခဲ့သူ
အချစ်ဆိုတာ ဆန်းကြယ်ပါတယ်….အချစ်အတွက် ဘာမဆိုလုပ်ရဲပြီး နောက်ဆုံး အသက်ပါပေးရဲတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်…. ခုလည်းပဲ အချစ်အတွက်နဲ့ အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာ အဖြစ်အပျက်လေးပါ…အံ့သြစရာကောင်းတာက သူအသက်ပေးချစ်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေးက အပြင်မှာတွေ့လို့ ချစ်ကြိုက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ အင်တာနက်ပေါ်က တစ်ဆင့်ချစ်ကြိုက်ပြီး ကောင်မလေးခေါ်လို့ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်သွားရာကနေ အသက်ပေးခဲ့ရတာပါပဲ….. အဲဒီကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်အကြောင်းလေးကို မိန်းကလေးတစ်ယောက်က လူမှုကွန်ရက်ပေါ်စတင်လိုက်ရာကနေ […]
ဗုဒ္ဓဂါယာမှ မျိုးယူထားသော မဟာဗောဓိပင် ညောင်ပင်အကိုင်းအခက်မှ ထူးဆန်းသော ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ပုံစံ ထွက်ပေါ်နေ
ငပလီမြို့တွင် မဟာဗောဓိပင် ( ဗုဒ္ဓဂါယာမှ မျိုးယူထားသော ညောင်ပင်)၏ အကိုင်းအခက်မှ ထူးဆန်းသော ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ပုံစံ ထွက်ပေါ်နေ…. ငပလီမြို့တွင် မဟာဗောဓိပင် ( ဗုဒ္ဓဂါယာမှ မျိုးယူထားသော ညောင်ပင်)၏ အကိုင်းအခက်မှ ထူးဆန်းသော ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ပုံစံ ထွက်ပေါ်နေသောကြောင့် မည်သူမဆို အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် နေ့စဉ်ဖူးမျှော်ခွင့်ပေးထားပါတယ်….။ နေ့ရောညပါ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ […]
မြန်မာပြည်ကြီးအတွက်ဦးထွန်းလွင်မှာခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးစကား ဗီဒီယိုဖိုင်
ဦးထွန်းလွင်မှာခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးအတွက် နောက်ဆုံးစကား ဗီဒီယိုဖိုင် သူမရှိတော့တဲ့အခါ မိုး/ဇလဌာနက ပညာတတ်လူငယ်တွေ တိုင်းပြည်အပေါ်အလုပ်အကျွေးပြုလို စိတ်ရှိကြဖို့နဲ့ ပညာတတ်တွေကို နိုင်ငံတော်က ချီးမြှောက်ပေးဖို့ မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒပညာရှင်ကြီး ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင် အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ […]